Snapdragon 700: Sirdoonka macmalka ah wuxuu gaarayaa taleefannada casriga ah ee ugu raqiisan | Androidsis
Snapdragon 700: Sirdoonka macmalka ah wuxuu gaaraa taleefannada casriga ah ee ugu raqiisan
Eder Ferreno | | MWC, Noticias
Qualcomm waa mid ka mid ah shirkado badan oo goob joog ka noqon lahaa MWC 2018. Shirkadda ayaa laga filayey inay soo bandhigto processor-keeda cusub. Sirdoonka macmalka ah ayaa sidoo kale laga filayay inuu door door ah ka qaato. Wax in ugu dambeyntii la xaqiijiyay la leh soo bandhigida Snapdragon 700, Khadadka cusub ee shirkadda ee processor-rada ah.
Qualcomm ma rabto sirdoonka macmalka ah inuu gaar u noqdo dhamaadka-dhamaadka. Tani waxay umuuqataa fariinta cad ee shirkadu rabto inay dirto. Sidaa darteed, processor-keeda cusub ee Snapdragon 700 ayaa mas'uul ka ah inay ka caawiyaan inay gaarto taleefannada casriga ah ee ugu raqiisan suuqa.
Dhowr usbuuc ka hor, shirkadda ayaa qorsheyneysa inay sameyso taleefannada gacanta ee Snapdragon processor-ka ah oo horeyba suuqa ugu jiray ayaa sidoo kale marin u heli kara caqliga macmalka ah. Hadda, qoyskan cusub ee processor-rada ah waxay raadinayaan inay sii ballaariyaan isticmaalkooda.
Ilaa hadda, soo saarayaashu waxay kala dooran karaan Snapdragon 600 (heer dhexe) iyo Snapdragon 800 (heer sare). Marka hadda waxay abuureen qoys cusub oo suuqa ku soo bandhigaya heer cusub oo processor-rada ah. Tani waa ujeedada dhalashada Snapdragon 700.
Qoyskan cusub ee processor-rada ah waxaa laga filayaa inay yeeshaan shaqooyin aan lagu arkin meel ka baxsan processor-yada ugu awooda badan suuqa. In kasta oo xaaladdan ay diiradda saari doonaan sirdoonka farsamada leh Snapdragon 700. Intaa waxaa dheer, waxaa laga faallooday in hawlgallada noocan ah ay labanlaab ku noqon doonaan kuwa ku shaqeeya sida Snapdragon 660
Ma aha tan cusub ee qoyskan cusub ee ka shaqeynaya ay naga tagayaan. Sababtoo ah xawaareynta degdegga ah waxay sidoo kale gaartaa taleefannada isticmaalaya. Snapdragon 700 wuxuu adeegsan doonaa Quick Charge 4.0 wuuna bixin doonaa xawaaraha xawaaraha ilaa 50% 15 daqiiqo.
Waqtigaan la joogo lama oga goorta processor-radan ay suuqa imaan doonaan, iyo taleefoonada dhejin doona. Laakiin waxaan u qaadaneynaa inaan ogaan doonno faahfaahin dheeraad ah toddobaadyada soo socda. Waxaan u maleyneynaa inay ku dhufan doonaan suuqa sanadkan ama horraanta 2019.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Snapdragon 700: Sirdoonka macmalka ah wuxuu gaaraa taleefannada casriga ah ee ugu raqiisan
Wiko Tommy 3, Lenny 5 iyo Jerry 3: Nooca ugu hooseeya sumadda ee leh Android Go
LG wuxuu soo bandhigayaa K10 iyo K10 Plus, oo ah laba terminaal dhammaad hoose ah